ओठ सुन्दर बनाउने उपायहरू यस्ता छन् हेनुस » खबरहरुको एउटै केन्द्र
ओठ सुन्दर बनाउने उपायहरू यस्ता छन् हेनुस
बिहीबार, बैशाख २७, २०७५ १२:०७ मा प्रकाशित !
उमेर तथा अन्य विविध कारणले कहिलेकाहीँ ओठको रङ परिवर्तन हुन सक्छ । मानिसहरु आफ्नो ओठमा प्राकृतिक रंग फर्काउन विभिन्न कस्मेटिक सामग्री प्रयोग गर्छन् । तर, केही त्यस्ता उपाय पनि छन्, जसले तपाईको प्राकृतिक चमकलाई ओठमा फर्काउन सक्छ ।
ओठ कालो हुने कारण
अनियमित खानपान, अस्तव्यस्त जीवनशैली र धुम्रपानको असर ओठमा पर्छ । त्यस्तै, डिहाइड्रेशनले पनि समस्या पार्छ । त्यसैले नियमित रुपमा आवश्यक पानी पिउनुहोस् । व्यायाम र नियमित खानपानमा ध्यान दिनुहोस् ।
कफीको अत्याधिक सेवनले पनि यस्तो समस्या निम्याउनसक्छ ।
सस्तो र कम गुणस्तरका कृतिम सामाग्रीहरुको प्रयोग कम गर्नुहोस् । डेट एक्सपायर भएका लिपिस्टिकको प्रयोगले पनि समस्या सिर्जना गरेको हुनसक्छ ।
राती सुत्नुअघि मेकअप हटाउने गर्नुहुन्न भने पनि यसले तपाईको ओठको रंग बदलेको हुनसक्छ ।
प्रदुषण तथा घामको विकिरणका कारण पनि ओठ कालो हुनसक्छ ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
समाधानका केही घरेलु उपाय
कागतीलाई निचोरेर ओछ्यानमा जानुअगाडि ओठमा लगाउनुपर्छ । एकदेखि दुई महिनासम्म यो नियमित गर्नुपर्छ । त्यसका साथै एक चिम्टी चिनी वा अलिकती मह ओठमा छर्किनुहोस् र कागतीको टुक्रा ओठमा दल्नुहोस् । यसले तपाईंको ओठको पुराना काम नलाग्ने कोषलाई ताजा र चम्किलो बनाइदिन्छ ।
कालो ओठलाई गुलाबी बनाउन चुकन्दर पनि सहयोगी हुन्छ । यसमा भएको स्वाभाविक सेतो तत्वले तपाईंको ओठ चम्किलो बनाउ“छ । सुत्नुअघि चुकन्दर लगाउने र बिहान सफा गर्नुपर्छ । चुकन्दरको रातो रङले ओठलाई गुलाबी बनाइदिन्छ ।
ओठमा भएका पुराना कोषिका जसले तपाईंको ओठलाई कालो बनाएको छ, तिनलाई हटाउन हप्तामा एकपटक ब्रसले बिस्तारै घोट्नु राम्रो हुन्छ । तर, यसो गर्दा ओठमा घाउ हुने गरी घोट्नुहुँदैन । ओठबाहिर सामान्य रगड्दा बिस्तारै पुराना कोषिका हटेर नया“ आउ“दा तपाईंको ओठको सुन्दरता बढ्दछ । यसका साथै जैतुनको केही थोपा र एक चम्चा चिनी मिसाएर ओठमा लेपन गरी रगड्दा पनि राम्रो हुन्छ ।
ओठमा ध्युकुमारीको प्रयोग गर्दा पनि चमक बिस्तारै फर्कन सक्छ । त्यस्तै, दुध र बेसार मिसाएर लगाउँदा पनि राम्रो हुन्छ ।
PREVIOUS POST Previous post: यस्तो छ आज विभिन्न विदेशी मुद्राको नेपाली सटही दर
NEXT POST Next post: प्रियंकालाई कम फिल्म खेल्न ऋचाको सुझाव
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, बैशाख २७, २०७५ १२:०७
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, बैशाख २७, २०७५ १२:०७
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, बैशाख २७, २०७५ १२:०७
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, बैशाख २७, २०७५ १२:०७
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, बैशाख २७, २०७५ १२:०७